वाह् ! आईपीएलमा सन्दिपको सुपर प्रदर्शन – तहल्काखबर
वाह् ! आईपीएलमा सन्दिपको सुपर प्रदर्शन
२०७५ जेष्ठ ६ १८:२५ May 20, 2018 गोपिन पोखरेल
‘उत्कृष्ट खोज, वाह् ! क्या खेलाडी’ इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा अन्तिम खेलमा जित हात पारेपछि दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दिप लामिछानेको तस्वीर ट्वीट गर्दै लेखेको छ ।
साँचै सन्दिप दिल्लीका लागि उत्कृष्ट छनोट बने । सुरुवाति ११ खेलमा बेञ्चमा विताएका १७ वर्षे नेपाली युवकले जब मौका पाए, आफूलाई प्रमाणित गरे । अन्तिम खेलको प्रदर्शन त ‘सुपर’ नै रहृयो ।
आईपीएल अरु खेलाडी जस्तै सन्लिपको पनि सपना थियो । अक्सनमा बोली लागेपछि उनको दिल्ली यात्रा त पक्का भयो तर, खेल्न पाउने नपाउने ठूलो संसय थियो । किनभने हरेक टिममा एकसेएक खेलाडीहरु थिए ।
त्यसैले होला सन्दिपले ११ खेल बेञ्चमा विताए । तर, जब दिल्ली प्ले अफमा पुग्ने सम्भावना टर्‍यो, सन्दिपको भाग्य खुल्यो । दिल्लीको बाँकी तीन वटै खेलमा सन्दिपले खेल्ने मौका पाए ।
आफ्नो पहिलो खेलमा उनले रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोरविरुद्ध ४ ओभरमा २५ रन खर्चेर १ विकेट लिए । खेलमा दिल्ली ५ विकेटले पराजित भएपनि सन्दिपको बलिङको भने तारिफ भयो ।
दोस्रो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ४ ओभरमा २१ रन खर्चेर १ विकेट लिएका उनी ‘स्टाइलिस प्लेयर अफ द म्याच’ नै भए । सन्दिपले महेन्द्र सिंह धोनी र सुरेस रैनाको साझेदारी तोडेको खेलमा दिल्ली ३४ रनले विजयी भयो । दिल्लीका लागि चेन्नईविरुद्धको जित ठूलो थियो ।
लगातार दुई खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका सन्दिप अन्तिम खेलमा निर्विकल्प बने । र, त्यसलाई उनले प्रमाणित पनि गरे । अन्तिम दिनको खेल चलिरहँदा नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्काले सन्दिपको समर्थनमा ट्वीट गरेका थिए, ‘निकै राम्रो गर्‍यौ, अझै धेरै अघि जानु छ ।’
साच्चै मुम्बईको प्ले अफको बाटो बन्द गर्न सन्दिपको भूमिका महत्वपूर्ण रहृयो । दिल्लीको पहिलो ओभर नै बलिङ गर्न आएका उनले १३ रन खर्चेर १ विकेट लिए ।
त्यसले मुम्बईमाथि थप दबाब बनाउन महत्वपूर्ण सावित भयो । खेलमा दिल्ली ११ रनले विजयी भयो । खेलपछि दिल्लीका कप्तान श्रेयस ऐयरले सन्दिपको बलिङ उत्कृष्ट रहेको र जितको आधार भएको प्रतिक्रिया दिए ।
र, सुरुका खेलमा दिल्लीले सन्दिपलाई खेलाउँदा नतिजामा फरक पर्ने समर्थकको भनाइलाई सत्य सावित गरिदिए ।
यसले सन्दिपलाई भविष्यका लागि थप चुनौती थपेको प्रशिक्षक टमाटा बताउँछन् । ‘त्यो स्तरमा खेल देखाएपछि उसमा अझ राम्रो गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । नेपाली टिममा पनि अझ राम्रो गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
सन्दिपले आईपीएलमा गरेको १२ ओभरमा ८२ रन खर्चिएर ५ विकेट लिएका हुन् । उनको इकोनोमी ६.८३ र एभरेज १६.४० रहृयो ।
२० लाख भारतीय रुपैयाँमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले सन्दिपलाई टिममा आबद्ध गर्दा जुन अपेक्षा गरेको थिएन, आफू त्यो अपेक्षालायक भएको उनले देखाए ।
← आईपीएलमा मुम्बईविरुद्ध सन्दिपले लिए ३ विकेट
सतासी सहकारीमा लघु उद्यम तालिम सुरु →